Qatar oo ku dhowaaqday in maalgashi toos ah oo 15 bilyan doolar ay gelineyso Turkiga… – Hagaag.com
Qatar oo ku dhowaaqday in maalgashi toos ah oo 15 bilyan doolar ay gelineyso Turkiga…
Posted on 15 Agoosto 2018 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Madaxtooyada Turkiga ayaa sheegtay in Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, uu ku dhawaaqay maalgashi toos ah oo qiimihiisu dhan yahay $ 15 bilyan oo doollar dalka Turkiga, kadib markii uu wadahadal la yeeshay Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan magaalada Ankara.
Labada dhinac ayaa wada hadalo ku yeeshay xarunta madaxtooyada, kuwaas oo ka wada hadlay xiriirka laba-geesoodka ee istiraatiijiga ah iyo horumarkii ugu dambeeyay ee gobolka iyo kan caalamiga ah.
“Qatar waxay ku maalgelin doontaa $ 15 bilyan oo doollar waddankeena, dhaqaalaheena wuxuu ku salaysan yahay aasaas adag, Turkigana wuxuu ka soo bixi doonaa asaga oo xoog badan marxaladdan,” sidaasi waxaa yiri afhayeenka madaxtooyada.
Dhiniciisa, safiirka Qatar ee Ankara Salem bin Mubarak Al Shafi ayaa sheegay in Turkiga uu yahay “isbahaysi istiraatiiji ah ..”, isagoo intaa ku daray in wadankiisa uusan “Ka laba labayneynin in ay taageerada loo baahan yahay la garab istaagaan Jamhuuriyadda Turkish.”
Al-Shafi ayaa carabka ku adkeeyay in booqashada Amiirka ay muujineyso “xoogga xiriirka Qatar-Turkiga, iyada oo weheliso qaar ka mid ah horumarada wanaagsan, taasi ayaa xaqiijineysa heerka uu gaarsiisan yahay wadajirka labada shacbi ee Qatar iyo Turkiga iyo wadajir u hor istaagooda ka dhanka ah caqabadaha soo wajaha”.
Xidhiidhka Qatar-Turkiga ayaa isku xira dhammaan heerarka, iyada oo ku saleysan yahay aragtida guud ee labada dal ee dhammaan arrimaha Carabta,mida goboleed iyo caalamkaba.